छोलेको साथ9ग्रीष्मकालीन व्यंजनहरु | ThermoRecines
छोलेको साथ summer ग्रीष्मकालीन व्यंजनहरु
मायरा फर्नांडीज जोग्लर | | सजिलो, तरकारीहरू, गर्मी रेसिपी
यस कम्पाइलेशनमा तपाईंले छोलेको साथ summer ग्रीष्मकालीन व्यंजनहरू भेट्टाउनुहुनेछ तिनीहरूले तपाइँको गर्मी मेनूमा फलियां सामेल गर्न मद्दत गर्दछ।
बिभिन्न र साधारण विचारहरु जुन तपाईं छोको सबै पौष्टिक गुणहरूको मजा लिन सक्नुहुनेछ।
यसको स्वादको साथ फेरि प्रेममा खस्नुका साथै तपाईले त्यो पत्ता लगाउनु हुनेछ यो फली धेरै बहुमुखी छ र यसले तपाईंलाई असंख्य व्यंजनहरू तयार गर्न मद्दत गर्दछ।
1 कुन छ ग्रीष्म recतुका व्यंजनहरू हामीले तपाईंको लागि छनौट गरेका छौं?
1.2 मुख्य पाठ्यक्रम
2 र साथै ... छोला सलाद!
कुन छ ग्रीष्म recतुका व्यंजनहरू हामीले तपाईंको लागि छनौट गरेका छौं?
फलाफेल: तिमी हो मीटबलहरू तिनीहरू छोलाले बनाइन्छन् र लसुन, धनिया, जीरा र दालचिनीको एक स्वादले स्वादले तिनीहरूलाई फरक र स्वादिष्ट बनाउँदछ।
चिक्का टोस्टेड फ्लोर केक: तिमीलाई थाहा छ घरमा चन्नको पीठो बनाउनु एकदम सरल छ र यसको साथ तपाईं यस केक जस्तो आश्चर्यजनक व्यंजनहरू तयार गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईं कुनै पनि पाटे साथ गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ वा क्रिम चिज।
मसालेदार चना नास्ता: यो मेरो अन्तिम दुर्गुणहरू मध्ये एक हो। तिनीहरू त्यस्तै छन् खस्ता र स्वादिलो यो मात्र एक छुन खान असम्भव छ। चिसो पेयसँग यसको सेवा गर्नुहोस् र तपाईले पाहुनाहरूलाई कसरी चकित पार्ने देख्नुहुनेछ।
हमस: छोले पकाएको व्यंजनहरूको यस संग्रहमा तपाईंले ह्युमसलाई मिस गर्न सक्नुहुन्न। एक हो धेरै सरल र धनी तयारी त्यो तपाइँको सबै अनौपचारिक रात्रिभोजमा उपस्थित हुनेछ। यसका अतिरिक्त धेरै छन् बिभिन्न संस्करणहरु ताकि तपाइँ तपाइँको मनपर्ने छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
खुर्सानी र खसी पनीर संग छानाको एक स्वादिष्ट र मौलिक संयोजन मिर्चको ओछ्यानमा पाउनुहोस् र खसीको चीजको क्रीमले ढाकिएको छ। A नयाँ र स्वादिष्ट प्रस्तावफलफूल खान मद्दत गर्न।
अंडे बिना आमलेट: अर्को अचम्मको तरीका जसमा तपाईले घरको चनाको पीठो प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो पनि एक हो राम्रो विकल्प जो शाकाहारी आहार पछ्याउँदछन् वा अण्डाहरूमा एलर्जी हुन्छन्।
Veggie बैंगन बर्गर: यी हैम्बर्गर्स तिनीहरूसँग यो सबै छ। तिनीहरू छोला र औबर्गिनले बनेका हुन्छन्, तिनीहरू सरल छन् र स्थिर पनि गर्न सकिन्छ।
तरकारी र छोलाको कुचस यो तरकारी र छोलाको बनाउने विधि पूर्ण र पौष्टिक छ। यो बिभिन्न तरीकाले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ र समुद्र तट, पोखरी वा काममा जानको लागि यातायात गर्न सजिलो छ।
लसुन चची सासको साथ ब्रोकोली: हो, यस नुस्खाको नायक ब्रोकोली हो तर यो पकाउने बिना यो नुस्खा उस्तै हुने छैन स्वादिलो ​​चटनी। एक नुस्खा जुन तपाईं फूलगोभी वा गाजरसँग पनि बनाउन सक्नुहुन्छ।
र साथै ... छोला सलाद!
अघिल्लो रेसिपीहरूमा थप हामी quick द्रुत र साधारण सलादहरू प्रस्ताव गर्दछौं ताकि गर्मीमा छोला खान सजिलो र रमाईलो होस्।
तिनीहरू समुद्रीतट, पोखरीमा जानका लागि वा काम गर्नका लागि स्वास्थ्यकर र स्वस्थ विकल्पहरू हुन् किनभने तिनीहरू सरल र यातायात गर्न सजिलो छन्।
पालक र कडा-उमालेको अण्डा विनाग्रेटको साथ: हामीले परम्परागत वेकिंग पट्टेजलाई संस्करण गरेका छौं यसलाई तातो दिनमा अनुकूल बनाउन।
कागती पोशाक संग: को निम्बूको सिट्रस नोटहरूले ताजगी दिन्छ र तिनीहरू चुचाहरू, टमाटर र फेटा चीजको स्वादको साथ पूर्ण रूपमा मिल्दछन्।
एप्पल tzatziki साथ: una धेरै ताजा सलाद त्यो अग्रिम गर्न सकिन्छ। तपाईं यसलाई छोलाको साथ मात्र बनाउन सक्नुहुन्न तर दाल, सिमी वा अन्य कुनै पातहरू सहित पनि।
करी vinaigrette संग: करी र जीराको साथ बनेको यो भिनाग्रेटले तपाईंलाई पूर्वी देशहरूमा ओसारपसार गर्दछ जब कि मजा लिदै छ भिटामिन र खनिजहरूले भरिएको प्लेट।
थप जानकारी - Cream क्रीमी ह्युमस नन स्टप फैलिन्छ / होममेड Labneh
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: सजिलो, तरकारीहरू, गर्मी रेसिपी
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » लेखहरू » विशेष व्यंजनहरु » गर्मी रेसिपी » छोलेको साथ summer ग्रीष्मकालीन व्यंजनहरु
एबर्जिनका साथ rec रेसिपीहरू